Jawaabaha codsiyadda muhaajiriinta oo la sheegay in eey qaadanayaan waqti dheer | Somaliska
Laanta socdaalka dalkaan Iswiidhan ayaan weli u yeerin kumanaan magangalyo doon ah oo dalkaan weeydiistay sanadkii 2015-ka. Dadka dalkaan magangalyadda weydiistay dowladda Iswiidhan ayaa gaaray 10.600 (toban kun iyo lix boqol) oo qof, kaas oo tan iyo markii ay codsigooda magangalyo doonimo dhiibtaan aan wareysi lala yeelan.
Amuurtan ayaa macnaheedu tahay in aan laanta socdaalka weli eeysan gudo galin wareysiga dalabyadaasi, saas oo ay tahayna waxaa ay laanta horey u sheegtay in muddada qofa loo qabto eeysan ka badneyn afar bilood, halka dadkii dalkaan yimid ee muhaajirinta ahaa sanadkii 2017-ka aan weli loo yeerin.
” Sideedaba waqtiga gudo-galka maanta waa dheer yahay, waxayna dabo socotaa in waddanka ay timid 35-36 000 oo ah da’yar keli socod ah sannadkii 2015, waa sida keliya ee lagu sharaxi karo xaalka sida uu yahay, ayuu yeri Fredrik Bentsson oo warbaahinta u qaabilsa hey’adda socdaalka ee Migrationsverket-ka.
Laanta socdaalka ayaa horey u qoshaha ugu jiray in ay dhamaan qaxootigii dalkaan ku soo jabay 2015, laga gaaro go’aano codsiyadooda ogolaansho ama diidmo, waxaase muuqata in aan weli talaabo ceynkaasi ah la qaadin. Dhinaca kale toddobaadkii ina dhaafay ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in hey’adda socdaalka in baaritaanada magaangeliyo dadyowgii dalkaan yimid labbo sanno ka hor la dhameeyn doono horaanta sanadka soo socda. Ugu dambeyntiina muddada la sugayo jawaabta oo aad u dheer ay sabab u tahay kiisaska dhiman ay yahiin kuwo ugu adag iyo isbaddelo dhanka howl wadeenada ah oo ay hey’adda sameysay.
Magangalyo doonka cusub oo siyaaday